संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसी यथावतः अर्थमन्त्री « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसी यथावतः अर्थमन्त्री
प्रकाशित मिति : २०७७, १९ जेष्ठ सोमबार १४:४६
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अघि नबढ्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एमसीसी बजेटको अनुसूचीमा तीन वर्षदेखि लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरु काम अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले एमसीसीमार्फत आउने अमेरिकी सहयोग रकम संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै त्यो बेला निकासा हुने र त्यतिबेलासम्म यथावत नै रहने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्त आयोगको सुझाव अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले बाह्य स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकसँग कोभिडको समस्या समाधानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सहयोग सम्झौता गरिएको बताए । त्यसैगरी विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका उनले बताए ।